The4wives of our lives | The World of Pinkgold
Taungoo on September 16, 2008 at 8:39 am said:
ပုံပြင်လေးကို ကြားဖူးပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အောက်က ဖြေရှင်းချက်တစ်ချို့က နည်းနည်းများ လွဲနေသလားလို့ပါ။ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
Mghtet on September 16, 2008 at 7:25 pm said:
…Pinkgold you looks like singing in that Video,name is ပုဇွန်ဇိတ်ကလေး…http://mmtoday.blogspot.com/
လူသစ် on September 18, 2008 at 10:40 am said:
စာလုံးအကြီးတွေနဲ့အစား စာလုံးပုံမှန်ကိုပဲ ကာလာနဲ့ဆိုရင် ဖတ်လို့ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ရဲ့
Pinkgold on September 18, 2008 at 12:21 pm said:
ကိုတောင်ငူရေ.. ဖြေရှင်းချက်တွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲရှင့်.. အောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းရောက်ခါနီးမှာ GM က Meeting ခေါ်လို့ run through ဘာသာ ပြန်လိုက်ရတာတော့ ရှိတယ်ရှင့်… (our Soul is the only thing that will follow us wherever we go. Cultivate, strengthen and cherish it now, for it is the only part of us that will follow us to the throne of God and continue with us throughout Eternity. Thought for the day: Remember, when the
world pushes you to your knees, you’re in the perfect position to pray.) ဆိုတာ လေးကိုပါရှင်.. အဲဒါကို သူ့အတိုင်း မရေးပဲ ခပ်တိုတိုပဲ ထင်သလို ရေးလိုက်မိပါတယ်.. အဟီး။
တိုတိုလူသစ်.. စာလုံးက တမင်ကြီးထားတာ မဟုတ်ဘူး.. မေလ်းကနေ ပိုစ့်လုပ်တော့ အဲလို ဖြစ်တွားတာ.. အထဲဝင်ပြင်တော့လည်း မရတော့ဘူး ဘာမှားနေလဲ တိဝူးတော့
Tin on September 30, 2008 at 2:59 pm said:
You may glance thru following link if you have time. And you will understand more of circle of life.